Covid-19 ကပ်ဘေးကြောင့် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ ထိခိုက်နိုင်လား
ရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မမြန္ဒာသင်း
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ အကျပ်အတည်းကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအဘက်ဘက်မှ ရိုက်ခတ်မှုတွေ၊ ထိခိုက်မှုတွေ သက်ရောက်မှုတွေ အတော်များများရှိနေပါတယ်။ အလားတူပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သက်ရောက်မှုက တနည်းမဟုတ်၊ တနည်းကတော့ ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုကုစားနိုင်မလဲ။ ဘယ်လောက်မှု သက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ New Myanmar Foundation က အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မမြန္ဒာသင်း ကို ကိုသားညွန့်ဦးက အွန်လိုင်းကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ကျနော် အခုနပြောသွားသလိုပါပဲ အရင်ဆုံး လက်ရှိကမ္ဘာ့ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကြောင့်မို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ။ အထူးသဖြင့် စည်းရုံးရေးကာလကလဲ နီးနေပြီဆိုတော့ အဲဒီပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ စည်းရုံးရေးကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်တော့ အင်မတန်မှပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုတဲ့အခါကြတော့ ကျမတို့ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တော့ ဧပြီနောက်ဆုံးပတ် သင်္ကြန်ကာလနောက်ပိုင်းကနေ ဒီလ (၁၀) ရက်နေ့လောက်အထိ မေးခွန်းလေးတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီမှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့ ပါတီတွေက - သူတို့မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတော့ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ အခု (၅) ယောက်ထက်ပိုပြီးတော့ လူမစုရဘူးဆိုတာ ရှိတဲ့အခါကြတော့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်တယ်။ တချို့ တွေကြတော့လဲ Online Platform ကို သိပ်ပြီးတော့ မသုံးတဲ့အတွက် ရုတ်တရက် ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကို အချိန်မီ မလုပ်နိုင်ပါ။ စည်းရုံးရေးတွေ မလုပ်နိုင်မှာကို စိုးရိမ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့်က ရွာတွေများတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ဒီဟာကို အချိန်မီ မရောက်နိုင်တာ။ စည်းရုံးရေးလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ တအိမ်တက်ဆင်း လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် အချိန်မလုံလောက်တာမျိုးတွေ။ နောက်ပြီးတော့ စေတနာဝန်ထမ်းတွေ ရှာရမယ့်အလုပ်၊ လိုက်လုပ်ပေးမယ့်လူတွေ ရှာရမှာတွေ စသည်ဖြင့် အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပါ။
ဒီလိုအခက်အခဲတွေက ပါတီတွေ တော်တော်များများပါ စိတ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေကြတယ်။ တချို့ ပါတီတွေကတော့ လူမှုကွန်ရက်ကိုသုံးပြီးတော့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး နည်းလမ်းတွေကို ပြောင်းဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ပါတီတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲများ လုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးရှိပြီးတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဒီအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမျိုးတွေကို လုပ်ဖို့အတွက်တော့ သူတို့အနေနဲ့ လိုအပ်ပါမယ်။
မေး ။ ။ ဒီနေရာမှာ မမြန္ဒာသင်းတို့က နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ အမြင်က ဒီရွေးကောက်ပွဲကို အခုလိုအနေအထားမျိုးမှာ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ကို ဘယ်လိုများ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျမတို့ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါကြတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ တော်တော်များများကတော့ သူတို့က လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ စိုးရိမ်ပူပန်တာက ဒီဟာကို ဘယ်လိုကျော်လွှာမလဲပေါ့။ နောက် ဘယ်လိုမျိုး ဖြေရှင်းကြမလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံးရဲ့  ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံမှုတို့ကို ဘယ်လိုအာမခံချက်တွေ ပေးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ စိတ်ပူပန်မှုတွေ ရှိကြတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့အနေနဲ့ ပါတီတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ခေါ်ယူပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးလေးတွေလည်း လုပ်သင့်တယ်။ ဒီကနေပြီးမှ စုပေါင်းပြီးတော့ အဖြေရှာသင့်တယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒီနေရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်က အခုအခြေအနေမျိုးမှာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားရကျေနပ်မှု ရှိရဲ့ လား။ လုံလောက်နေပြီလား။ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိသလား။ ဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ သူလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတော့ ဆက်လုပ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာကတော့ ဒီအခက်အခဲက အကုန်လုံးရဲ့  အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာဆိုတော့ သူ့မှာလဲ မဲစာရင်းကောက်တာကအစ၊ မဲရုံမှာ ဝန်ထမ်းတွေကို သင်တန်းပေးမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တခြားသင်တန်းတွေလုပ်မယ်။ တစ်ခုခုပေါ့ ပြင်ဆင်စရာ ရှိတဲ့ဟာတွေကို သူတို့လဲ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် - ဥပမာ မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် လမ်းညွှန်ချက်တွေ ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ခဲ့သလဲ။ ဒါတွေလဲ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ရမယ့်အခါမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ အလုပ်တွေများလာတယ်။ ကျမတို့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါကတော့ အကုန်လုံးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ မဝေဖန်ချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပိုပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အမြဲတမ်း ထိတွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့မှ ကောင်းနိုင်တယ်လို့တော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက အဲဒီလိုမျိုး ဖြေပါတယ်။
မေး ။ ။ မမြန္ဒာသင်းကြတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ သေချာလေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ မမြန္ဒာသင်းတို့ရဲ့  အယူအဆက လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်၊ မျှမျှတတနဲ့ လုပ်သွားနိုင်ဖို့အခြေအနေ၊ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ဘယ်လိုများ ယူဆပါသလဲ။ အချိန်အခါ ရွှေ့ သင့်သလား။ ဒီအခြေအနေမှာ လုပ်သင့်သလား။
ဖြေ ။ ။ ကျမတို့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ ကောက်ချက်တွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်တော့ချလေ့ မရှိပါဘူး။ တစ်ခုခုဆိုရင် ကျမတို့လဲ လိုက်မေးတယ်။ လိုက်မေးတဲ့အခါမှာ ဒီကာလထဲမှာ မဲဆန္ဒရှင် (၇၀၀) ကျော်လောက်ကို မေးဖြစ်တယ်။ ဖုန်းအင်တာဗျူးတွေနဲ့ မေးပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို အဓိထားပါတယ် - ရန်ကုန်က (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ နောက်တခြားပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာ ကျမတို့ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း မေးတဲ့အခါမှာ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့  ဖြေတဲ့သူရဲ့  (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ကျင်းပစေချင်ပါတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ ကျန်တဲ့ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းကတော့ နောက်ဆုတ်သင့်တယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ နောက်ဆုတ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ ဥပမာ သူတို့က ဘာစိတ်ပူတာလဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ကူးစက်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ တခြားအခက်အခဲ နေအိမ်မှာပဲ နေနေတယ်ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲကိုသွားရင် လူစုလူဝေးနဲ့ ဖြစ်မလား။ တခြားအခက်အခဲတွေ ရှိမလား စသည်ဖြင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ စိတ်ပူပြီးတော့ နောက်ဆုတ်ဖို့အတွက် ပြောကြပါတယ်။
အခုန မဲသွားပေးမယ်ပြောတဲ့ အုပ်စုတွေကလဲ သူတို့မှာ အကြံပြုချက်တွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို့။ နောက်ပြီးတော့ Mask တွေ၊ လက်အိတ်တွေ ဒါမျိုးတွေကိုလဲ ပံ့ပိုးပေးဖို့ဟာမျိုးတွေ။ နောက်ပြီးတော့ သုံးပေအကွာ။ နောက် မဲရုံတွေကို အများကြီးလုပ်သင့်တယ်။ တစ်နေရာထဲမှာ စုပြုံနေတယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဒါလေးတွေကိုတော့ အာမခံပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အာမခံပြီးတော့ လုပ်သင့်တယ် ဆိုပြီးတော့ အများကြီးပဲ အကြံပြုချက်တွေ ပေးကြပါတယ်။ တချို့ ဆိုရင် ကြိုတင်မဲကိစ္စမျိုးကို ပိုပြီးတော့ စဉ်းစားမလား။ ဒါမှမဟုတ် Positive ဖြစ်နေတဲ့ လူနာတွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စသည်ဖြင့် ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုလဲ အကြံပေးတာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မေး ။ ။ တချို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တချို့ နေရာတွေမှာ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ခဲယဉ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ တချို့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကို ချန်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ကျနော်မေးချင်တာက ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပါ။ ပြောမယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေက ပဋိပက္ခတွေက ပိုပြီးကြီးလာတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာသေးခင်ကပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ရှိသူတွေကို စပြီးတော့ တွေ့လာရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီမတိုင်မီကလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေရှိတော့ အခုလိုအနေအထားမျိုးမှာ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် တချို့ နေရာတွေမှာ ရွှေ့ ရကောင်းရွှေ့ ရနိုင်လား။ လုပ်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒီမှာလဲ အမျိုးမျိုးတော့ ယူဆနေကြတယ်။ တချို့ တွေကြတော့လဲ ဒီတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ရွှေ့ ပြောင်းရွှေ့ သွားနိုင်တယ်လို့ စိတ်ပူပန်နေတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျမတို့ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကြတော့လဲ ဒါက ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပဲ တရားမျှတမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာကို အတည်ပြုကြတယ်။ ဒီကြားထဲမှာတော့ တစ်ခုရှိတာက အထူးသဖြင့်ကတော့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေ၊ နောက် စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်း ရှိမယ်။ မငြိမ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာ ကိုဗစ်ကလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားစရာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးအခါကြတော့ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်က အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ Stakeholders တွေအားလုံးရဲ့  ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ သူတို့ရဲ့  စိတ်ဆန္ဒပဲ အဓိကအရေးကြီးပါတယ်။
မေး ။ ။ ကျနော် နောက်တစ်ချက်ကတော့ စည်းရုံးရေးကာလနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပါတီစည်းရုံးရေးကာလတွေက မကြာမီ ရောက်လာတော့မှာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်။ အဲဒီတော့ အာဏာရပါတီကြီးကတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့မှာ လူထုထောက်ခံမှု၊ လူထုအရှိန်အဝါကလည်း ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းက ပါတီငယ်တွေ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ သူတို့အတွက် စည်းရုံးရေးကာလက အတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခုလို ကိုဗစ်ကာလ အခြေအနေနဲ့ စည်းရုံးရေးကာလတွေ တိုသွားမယ်။ တစ်ခုခု ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်မျှတနိုင်ပါ့မလား။ သူတို့ပါတီငယ်တွေအတွက် မျှမျှတတ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ အခုအနေအထားအရ ဆိုရင်ပေါ့။
ဖြေ ။ ။ အဲဒီဟာကလဲ ပြောဆိုနေကြတယ်။ တော်တော်များများ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလဲ ဒီအပေါ်မှာ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိကြတယ်။ ပါတီငယ်လေးတွေ အတွက်ဆိုရင်။ အမှန်မှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမကြတော့ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာ အတူတူပဲ။ အတူတူပဲဆိုတာက မဲဆွယ်ရမယ့်ရက်တော့ အတူတူပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ကျမတို့က ပြောင်းလဲတဲ့နည်းတွေ - အရင်လိုပဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်လို့မရဘူး။ ဥပမာ (၅) ယောက်ထက်ပိုပြီး စုလို့မရဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်လို့ရသလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပါတီအသီးသီးမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက ဒါကို စဉ်းစားရမယ်။ ငါတို့က ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်မှာလဲ။ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ငါတို့ စာတိုက်ကနေပြီး ငါတို့ရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊ ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့  ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတွေ ဒါတွေကို ငါတို့ပို့မလား။ ဒါမှမဟုတ် တအိမ်တက်ဆင်း ငါတို့လုပ်ဖို့ အချိန်မီသလား။ အချိန်မမီဘူးဆိုရင် message ပို့ရမလား။ ဒါမှမဟုတ် လူမှုကွန်ရက်ကိုသုံးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေက လူတွေသိအောင်လုပ်မလား စသည်ဖြင့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကိုတော့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသီးသီးက အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ နည်းပညာနဲ့ သုတေသနပိုင်းတွေက ပိုပြီးတော့မှ အခရာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ ဘယ်သူက မဲပေးမလဲ။ အဲဒီမဲပေးတဲ့လူကို ကိုယ်ကရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရယူမလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေမှာတော့ ကျမတို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ကျမတို့က ရရှိစေတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် ပိုကောင်းတယ်။ ပိုတော်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်မှပဲ ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရမယ်။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုတော့ ပါတီတွေအနေနဲ့ ပါတီငယ်တယ်၊ ကြီးတယ် သဘောမထားဘဲနဲ့ ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းကို ရှာမလဲဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တရားမျှတတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်ဖို့အတွက် အနည်းငယ်တွန်းအားဖြစ်မယ်။
အဲဒီလောက်နဲ့လဲ ကျမတို့က မရဘူး။ ဘယ်လိုမျိုး ရှိသေးလဲဆိုတော့ ဥပမာ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့က တန်းတူညီမျှဖြစ်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဖန်တီးပေးရုံတင်မကဘဲ၊ ဥပမာ ဒီကာလမှာ အောင်နိုင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် အစိုးရရဲ့  မီဒီယာ၊ ပြည်သူပိုင်မီဒီယာတွေကို ပိုပြီးတော့ ပေးသုံးတာမျိုးတွေ။ ဘယ်တုန်းကတော့ (၁၀) မိနစ်၊ (၁၅) မိနစ် Broadcast လုပ်ပြီးတော့ ပါတီတွေအကြောင်းပြောတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ရမယ့် နှစ်လအတွင်းမှာ သူတို့ကို ပိုပြီးတော့ ပေးသုံးတာမျိုးတွေ၊ ရေဒီယိုချန်နယ်လ်တွေ ပေးလုပ်တာမျိုး၊ ပေးပြီးတော့သုံးခွင့်ပြုထားမယ်၊ ပေးမျှမယ် အကုန်လုံး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် လှုပ်သာကိုင်သာရှိမယ့် အနေအထားမျိုးလေးတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ တဆက်တည်း ကျနော်မေးချင်တာက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေတွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက ကိုဗစ်အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြောင်းလဲဖို့ လိုနေတာတွေ ရှိပါလား။
ဖြေ ။ ။ လိုတယ်လို့ ပြောတဲ့လူတွေ ရှိသလို၊ မလိုဘူးလို့လဲ ဆွေးနွေးကြတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက ကျမတို့ ဘာတွေ့ရသလဲဆိုရင် တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေတစ်ရပ်၊ ဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းပြီးတော့ ကိုဗစ်ဥပဒေ။ ဥပမာ ဒီလိုကပ်ရောဂါဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးကို လွှတ်တော်မှာ သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်။ အဲဒါမျိုးလဲ ကျမတို့ လုပ်လို့ရတယ်။
မေး ။ ။ ကျနော် နောက်ဆုံးတစ်ချက် မေးချင်ပါတယ်။ အခုန မမြန္ဒာသင်း ပြောသွားတဲ့အထဲမှာလဲ ပါပါတယ်။ အခု ကိုဗစ်ကာလ အကျပ်အတည်းမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့ က ရွေးကောက်ပွဲတွေကို မရရအောင် လုပ်သွားတာတွေ ရှိတယ်။ လုပ်သွားနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလိုအခြေအနေမျိုး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလဲ အခုလိုအနေအထားမျိုး။ ပါတီတွေရဲ့  အနေအထားမျိုးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ကျင်းပသွားမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်မျှတမှုကို တစုံတရာ ထိခိုက်သွားနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုး ရှိပါသလား။ မမြန္ဒာသင်းရဲ့  အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ အရင်လောက်တော့ …. သေချာတာကတော့ တအားကို ခက်ခဲနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ဘယ်လောက်အထိ လုပ်နိုင်သလဲ။ အခု အချိန်ကရှိနေသေးတော့ ရှိတဲ့အချိန်လေးပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့ - ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလဲ တဦိးတဖွဲ့တည်းက မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပမာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုရင် မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် လုံခြုံစေမယ့် မဲရုံတွေမှာ Mobile Clinic တွေ ထားပေးမယ်။ အပူချိန်မြင့်နေတဲ့ လူတွေဆိုရင်တော့ မဲရုံထဲကို မဝင်ဘဲနဲ့ အပြင်မှာပဲ ပေးမယ်။ ဥပမာ တံဆိပ်တုံးကို ထုမယ်ဆိုရင် လူတွေအများကြီးက ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကူးစက်မှုတွေ အန္တရာယ်တွေ ပိုရှိတာကြောင့် ကိုယ့်ဘောပင် ကိုယ်ယူလာပြီးတော့ အမှတ်ခြစ်မလား စသည်ဖြင့် ဒါက ဘယ်လိုမျိုး စီမံခန့််ခွဲဆိုတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်အထိ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အားလုံးရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။
မေး ။ ။ အခုလို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ကျမလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဗဈကပျရောဂါ အကပျြအတညျးကွောငျ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအဘကျဘကျမှ ရိုကျခတျမှုတှေ၊ ထိခိုကျမှုတှေ သကျရောကျမှုတှေ အတျောမြားမြားရှိနပေါတယျ။ အလားတူပဲ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ နှဈကုနျပိုငျးမှာ ကငျြးပဖို့ရှိတဲ့ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ သကျရောကျမှုက တနညျးမဟုတျ၊ တနညျးကတော့ ကွုံရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဘယျလိုကုစားနိုငျမလဲ။ ဘယျလောကျမှု သကျရောကျမှုရှိသလဲဆိုတာကို သိရှိနိုငျဖို့ ရှေးကောကျပှဲမြား စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရေးအဖှဲ့ New Myanmar Foundation က အမှုဆောငျညှနျကွားရေးမှူး မမွန်ဒာသငျး ကို ကိုသားညှနျ့ဦးက အှနျလိုငျးကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ကနြျော အခုနပွောသှားသလိုပါပဲ အရငျဆုံး လကျရှိကမ်ဘာ့ကိုဗဈ-၁၉ အကပျြအတညျးကွောငျ့မို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိကွုံနရေတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ။ အထူးသဖွငျ့ စညျးရုံးရေးကာလကလဲ နီးနပွေီဆိုတော့ အဲဒီပျေါမှာ ဘယျလောကျအထိ သကျရောကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျမလဲ။
ဖွေ ။ ။ ရှေးကောကျပှဲတဈခု လုပျမယျဆိုရငျတော့ စညျးရုံးရေးကတော့ နိုငျငံရေးပါတီတှအေတှကျတော့ အငျမတနျမှပဲ အရေးကွီးပါတယျ။ ဆိုတဲ့အခါကွတော့ ကမြတို့ကလညျး ရှေးကောကျပှဲကို လလေ့ာနတေဲ့အဖှဲ့ဖွဈတော့ ဧပွီနောကျဆုံးပတျ သင်ျကွနျကာလနောကျပိုငျးကနေ ဒီလ (၁၀) ရကျနလေ့ောကျအထိ မေးခှနျးလေးတှေ၊ နိုငျငံရေးပါတီတှကေို ဆကျသှယျပွီးတော့ ဖုနျးနဲ့ အငျတာဗြူးတှေ လုပျဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီမှာတော့ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး နိုငျငံရေးပါတီတှေ၊ အထူးသဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားဒသေမှာရှိတဲ့ ပါတီတှကေ - သူတို့မှာ စိုးရိမျပူပနျမှုတှတေော့ ရှိတယျ။ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတော့ အခု (၅) ယောကျထကျပိုပွီးတော့ လူမစုရဘူးဆိုတာ ရှိတဲ့အခါကွတော့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးတှမှော အခကျအခဲတှေ ရှိနိုငျတယျ။ တခြို့တှကွေတော့လဲ Online Platform ကို သိပျပွီးတော့ မသုံးတဲ့အတှကျ ရုတျတရကျ ဒီလိုလုပျဖို့အတှကျကို အခြိနျမီ မလုပျနိုငျပါ။ စညျးရုံးရေးတှေ မလုပျနိုငျမှာကို စိုးရိမျကွတယျ။ အထူးသဖွငျ့က ရှာတှမြေားတဲ့ မဲဆန်ဒနယျမွတှေဆေိုရငျ ပိုပွီးတော့ ဒီဟာကို အခြိနျမီ မရောကျနိုငျတာ။ စညျးရုံးရေးလုပျရမယျ့အခြိနျမှာ တအိမျတကျဆငျး လိုကျလုပျမယျဆိုရငျတောငျ အခြိနျမလုံလောကျတာမြိုးတှေ။ နောကျပွီးတော့ စတေနာဝနျထမျးတှေ ရှာရမယျ့အလုပျ၊ လိုကျလုပျပေးမယျ့လူတှေ ရှာရမှာတှေ စသညျဖွငျ့ အခကျအခဲတှကေတော့ အမြားကွီးပါ။
ဒီလိုအခကျအခဲတှကေ ပါတီတှေ တျောတျောမြားမြားပါ စိတျပူပနျမှုတှေ ရှိနကွေတယျ။ တခြို့ပါတီတှကေတော့ လူမှုကှနျရကျကိုသုံးပွီးတော့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး နညျးလမျးတှကေို ပွောငျးဖို့အတှကျ ကွိုးစားနတေဲ့ပါတီတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဆိုတော့ ဒီပါတီတှအေနနေဲ့ကတော့ ရှေးကောကျပှဲမြား လုပျဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ သူတို့အတှကျ စိနျချေါမှုတှေ အမြားကွီးရှိပွီးတော့ ပွောငျးလဲမှုတှေ၊ ဒီအခွအေနနေဲ့ ကိုကျညီတဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးမှုမြိုးတှကေို လုပျဖို့အတှကျတော့ သူတို့အနနေဲ့ လိုအပျပါမယျ။
မေး ။ ။ ဒီနရောမှာ မမွန်ဒာသငျးတို့က နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ ဆှေးနှေးကွညျ့တဲ့အခါမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့အမွငျက ဒီရှေးကောကျပှဲကို အခုလိုအနအေထားမြိုးမှာ လုပျသငျ့မလုပျသငျ့ကို ဘယျလိုမြား ရှိပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကမြတို့ မေးမွနျးကွညျ့တဲ့အခါကွတော့ နိုငျငံရေးပါတီ တျောတျောမြားမြားကတော့ သူတို့က လုပျခငျြစိတျရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့မှာ စိုးရိမျပူပနျတာက ဒီဟာကို ဘယျလိုကြျောလှာမလဲပေါ့။ နောကျ ဘယျလိုမြိုး ဖွရှေငျးကွမလဲ။ ရှေးကောကျပှဲကို လုပျလိုကျမယျဆိုရငျ အားလုံးရဲ့ ကနျြးမာရေး၊ လုံခွုံမှုတို့ကို ဘယျလိုအာမခံခကျြတှေ ပေးမလဲဆိုတဲ့အပျေါမှာတော့ စိတျပူပနျမှုတှေ ရှိကွတယျ။ နောကျတခကျြကတော့ ဒီအခွအေနမြေိုးမှာ သူတို့အနနေဲ့ ပါတီတှကေို ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ချေါယူပွီးတော့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြိုးလေးတှလေညျး လုပျသငျ့တယျ။ ဒီကနပွေီးမှ စုပေါငျးပွီးတော့ အဖွရှောသငျ့တယျလို့ ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အပိုငျးလေးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒီနရောမှာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဘကျက အခုအခွအေနမြေိုးမှာ ပွငျဆငျဆောငျရှကျနတောနဲ့ ပတျသကျလို့ အားရကနြေပျမှု ရှိရဲ့လား။ လုံလောကျနပွေီလား။ လိုအပျခကျြတှေ ရှိသလား။ ဘယျလိုမြားမွငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကတော့ သူလုပျရမယျ့တာဝနျတှကေိုတော့ ဆကျလုပျနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခုရှိတာကတော့ ဒီအခကျအခဲက အကုနျလုံးရဲ့ အခကျအခဲ ဖွဈနတောဆိုတော့ သူ့မှာလဲ မဲစာရငျးကောကျတာကအစ၊ မဲရုံမှာ ဝနျထမျးတှကေို သငျတနျးပေးမယျ။ ဒါမှမဟုတျ တခွားသငျတနျးတှလေုပျမယျ။ တဈခုခုပေါ့ ပွငျဆငျစရာ ရှိတဲ့ဟာတှကေို သူတို့လဲ ရုတျတရကျ ပွောငျးလဲရမယျ့ အခွအေနေ ဖွဈနပေါတယျ။ ကိုဗဈကပျရောဂါ ဖွဈနခြေိနျမှာ ရှေးကောကျပှဲလုပျဖွဈမယျဆိုရငျ - ဥပမာ မဲဆန်ဒရှငျတှအေတှကျ လမျးညှနျခကျြတှေ ဘယျလိုထုတျမလဲဆိုတဲ့ဟာမြိုးတှေ။ သူမြားနိုငျငံတှမှော ဘယျလိုအောငျမွငျအောငျ လုပျခဲ့သလဲ။ ဒါတှလေဲ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျရမယျ့အခါမှာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကိုယျတိုငျကတော့ အလုပျတှမြေားလာတယျ။ ကမြတို့နဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှေ ဆှေးနှေးကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ ဒါကတော့ အကုနျလုံးမှာ ဖွဈနတေဲ့ အခွအေနဆေိုတော့ မဝဖေနျခငျြဘူး။ ဒါပမေဲ့ ပိုပွီးတော့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုတှေ ရှိတယျ။ ဒါမှမဟုတျ အမွဲတမျး ထိတှနေ့တေယျဆိုရငျတော့ ပိုပွီးတော့မှ ကောငျးနိုငျတယျလို့တော့ နိုငျငံရေးပါတီတှကေ အဲဒီလိုမြိုး ဖွပေါတယျ။
မေး ။ ။ မမွန်ဒာသငျးကွတော့ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျလို့ သခြောလလေ့ာနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးဆိုတော့ မမွန်ဒာသငျးတို့ရဲ့ အယူအဆက လကျရှိရှေးကောကျပှဲကို လှတျလပျ၊ မြှမြှတတနဲ့ လုပျသှားနိုငျဖို့အခွအေနေ၊ လုပျသငျ့မလုပျသငျ့ ဘယျလိုမြား ယူဆပါသလဲ။ အခြိနျအခါ ရှသေ့ငျ့သလား။ ဒီအခွအေနမှော လုပျသငျ့သလား။
ဖွေ ။ ။ ကမြတို့ကတော့ ရှေးကောကျပှဲလလေ့ာနတေဲ့ အဖှဲ့ဆိုတဲ့အခါကွတော့ ကောကျခကျြတှကေိုတော့ ကိုယျတိုငျတော့ခလြေ့ မရှိပါဘူး။ တဈခုခုဆိုရငျ ကမြတို့လဲ လိုကျမေးတယျ။ လိုကျမေးတဲ့အခါမှာ ဒီကာလထဲမှာ မဲဆန်ဒရှငျ (၇၀၀) ကြျောလောကျကို မေးဖွဈတယျ။ ဖုနျးအငျတာဗြူးတှနေဲ့ မေးပါတယျ။ ရနျကုနျကို အဓိထားပါတယျ - ရနျကုနျက (၅၀) ရာခိုငျနှုနျး၊ နောကျတခွားပွညျနယျနဲ့ တိုငျးတှမှော ကမြတို့ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျး မေးတဲ့အခါမှာ မဲဆန်ဒရှငျတှရေဲ့ ဖွတေဲ့သူရဲ့ (၆၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျက ရှေးကောကျပှဲကို ဒီပုံစံအတိုငျးပဲ ကငျြးပစခေငျြပါတယျလို့ ဖွပေါတယျ။ ကနျြတဲ့ (၄၀) ရာခိုငျနှုနျးကတော့ နောကျဆုတျသငျ့တယျလို့ ဖွပေါတယျ။ နောကျဆုတျရတဲ့အကွောငျးကတော့ ဥပမာ သူတို့က ဘာစိတျပူတာလဲဆိုတော့ ရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာ ကူးစကျမှုတှေ ဖွဈနိုငျတယျ။ ပွီးတော့ တခွားအခကျအခဲ နအေိမျမှာပဲ နနေတေယျဆိုတော့ ရှေးကောကျပှဲကိုသှားရငျ လူစုလူဝေးနဲ့ ဖွဈမလား။ တခွားအခကျအခဲတှေ ရှိမလား စသညျဖွငျ့ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးတှပေျေါ မူတညျပွီးတော့ စိတျပူပွီးတော့ နောကျဆုတျဖို့အတှကျ ပွောကွပါတယျ။
အခုန မဲသှားပေးမယျပွောတဲ့ အုပျစုတှကေလဲ သူတို့မှာ အကွံပွုခကျြတှေ ရှိတယျ။ ဥပမာ ရှေးကောကျပှဲကို လုပျမယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှအေတိုငျး လုပျဆောငျပေးဖို့။ နောကျပွီးတော့ Mask တှေ၊ လကျအိတျတှေ ဒါမြိုးတှကေိုလဲ ပံ့ပိုးပေးဖို့ဟာမြိုးတှေ။ နောကျပွီးတော့ သုံးပအေကှာ။ နောကျ မဲရုံတှကေို အမြားကွီးလုပျသငျ့တယျ။ တဈနရောထဲမှာ စုပွုံနတေယျဆိုရငျ သူတို့အတှကျ အန်တရာယျရှိတယျ။ ဒါလေးတှကေိုတော့ အာမခံပွီးတော့ ရှေးကောကျပှဲကို လုပျမယျဆိုတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေ အာမခံပွီးတော့ လုပျသငျ့တယျ ဆိုပွီးတော့ အမြားကွီးပဲ အကွံပွုခကျြတှေ ပေးကွပါတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ ကွိုတငျမဲကိစ်စမြိုးကို ပိုပွီးတော့ စဉျးစားမလား။ ဒါမှမဟုတျ Positive ဖွဈနတေဲ့ လူနာတှအေတှကျ ဘယျလိုလုပျမလဲ စသညျဖွငျ့ ဒီလိုဟာမြိုးတှကေိုလဲ အကွံပေးတာတှလေညျး တှရေ့ပါတယျ။
မေး ။ ။ တခြို့ပွီးခဲ့တဲ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျ တခြို့နရောတှမှော လှတျလပျမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပဖို့ ခဲယဉျးတယျဆိုပွီးတော့ တခြို့မဲဆန်ဒနယျမွတှေကေို ခနျြခဲ့တာတှေ ရှိပါတယျ။ အခု ကနြျောမေးခငျြတာက ရခိုငျပွညျနယျအခွအေနပေါ။ ပွောမယျဆိုရငျ ရခိုငျပွညျနယျအခွအေနကေ ပဋိပက်ခတှကေ ပိုပွီးကွီးလာတယျ။ ဒါ့အပွငျ မကွာသေးခငျကပဲ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာ ကိုဗဈရောဂါပိုး ရှိသူတှကေို စပွီးတော့ တှလေ့ာရတဲ့ အခွအေနေ ဖွဈလာတယျ။ ဒီမတိုငျမီကလဲ ရခိုငျပွညျနယျထဲမှာ ရှေးကောကျပှဲလုပျနိုငျပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယတှရှေိတော့ အခုလိုအနအေထားမြိုးမှာ လှတျလပျမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲတှေ ရခိုငျပွညျနယျအပါအဝငျ တခြို့နရောတှမှော ရှရေ့ကောငျးရှရေ့နိုငျလား။ လုပျနိုငျပါ့မလား။
ဖွေ ။ ။ အဲဒီမှာလဲ အမြိုးမြိုးတော့ ယူဆနကွေတယျ။ တခြို့တှကွေတော့လဲ ဒီတိုကျပှဲတှေ ဖွဈနကွေတဲ့ နရောတှမှောတော့ ရှပွေ့ောငျးရှသှေ့ားနိုငျတယျလို့ စိတျပူပနျနတေဲ့လူတှလေညျး ရှိတယျ။ ကမြတို့ စောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့တှကွေတော့လဲ ဒါက ရှေးကောကျပှဲပွီးမှပဲ တရားမြှတမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာကို အတညျပွုကွတယျ။ ဒီကွားထဲမှာတော့ တဈခုရှိတာက အထူးသဖွငျ့ကတော့ ပဋိပက်ခဖွဈနတေဲ့ နရောတှေ၊ နောကျ စဈဘေးရှောငျတှလေညျး ရှိမယျ။ မငွိမျသကျတဲ့နရောတှမှော ကိုဗဈကလညျး ဖွဈတယျဆိုရငျတော့ စဉျးစားစရာတှကေတော့ အမြားကွီးပေါ့။ အဲဒီလိုမြိုးအခါကွတော့ ရှေးကောကျပှဲတဈခု လုပျဖွဈဖို့အတှကျက အဲဒီဒသေမှာရှိတဲ့ Stakeholders တှအေားလုံးရဲ့ ပါဝငျပတျသကျမှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတျဆန်ဒပဲ အဓိကအရေးကွီးပါတယျ။
မေး ။ ။ ကနြျော နောကျတဈခကျြကတော့ စညျးရုံးရေးကာလနဲ့ ပတျသကျလို့ မေးခငျြပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျ ပါတီစညျးရုံးရေးကာလတှကေ မကွာမီ ရောကျလာတော့မှာပါ။ ရှေးကောကျပှဲ လုပျဖွဈမယျဆိုရငျ။ အဲဒီတော့ အာဏာရပါတီကွီးကတော့ ပွောမယျဆိုရငျတော့ သူ့မှာ လူထုထောကျခံမှု၊ လူထုအရှိနျအဝါကလညျး ကွီးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးက ပါတီငယျတှေ အမြားကွီးပျေါလာတယျ။ သူတို့အတှကျ စညျးရုံးရေးကာလက အတျောလေးအရေးကွီးပါတယျ။ အဲဒီတော့ အခုလို ကိုဗဈကာလ အခွအေနနေဲ့ စညျးရုံးရေးကာလတှေ တိုသှားမယျ။ တဈခုခု ရိုကျခတျမှုတှေ ရှိလာမယျဆိုရငျ လှတျလပျမြှတနိုငျပါ့မလား။ သူတို့ပါတီငယျတှအေတှကျ မြှမြှတတ ဖွဈနိုငျပါ့မလား။ အခုအနအေထားအရ ဆိုရငျပေါ့။
ဖွေ ။ ။ အဲဒီဟာကလဲ ပွောဆိုနကွေတယျ။ တျောတျောမြားမြား နိုငျငံရေးပါတီတှကေလဲ ဒီအပျေါမှာ စိုးရိမျမှုတှေ ရှိကွတယျ။ ပါတီငယျလေးတှေ အတှကျဆိုရငျ။ အမှနျမှာ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကမြကွတော့ နိုငျငံရေးပါတီဆိုတာ အတူတူပဲ။ အတူတူပဲဆိုတာက မဲဆှယျရမယျ့ရကျတော့ အတူတူပဲ ဖွဈနတေယျ။ ဖွဈနတေယျဆိုတော့ ကမြတို့က ပွောငျးလဲတဲ့နညျးတှေ - အရငျလိုပဲ မဲဆှယျစညျးရုံးမှုတှေ လုပျလို့မရဘူး။ ဥပမာ (၅) ယောကျထကျပိုပွီး စုလို့မရဘူးဆိုရငျ ဘာလုပျလို့ရသလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှကေို ပါတီအသီးသီးမှာရှိတဲ့ ခေါငျးဆောငျပိုငျးတှကေ ဒါကို စဉျးစားရမယျ။ ငါတို့က ဘယျလိုနညျးလမျးနဲ့ လုပျမှာလဲ။ မဲဆန်ဒရှငျတှကေို ငါတို့ စာတိုကျကနပွေီး ငါတို့ရဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ၊ ပါတီရဲ့မူဝါဒတှေ၊ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ ကိုယျရေးအကဉျြးတှေ ဒါတှကေို ငါတို့ပို့မလား။ ဒါမှမဟုတျ တအိမျတကျဆငျး ငါတို့လုပျဖို့ အခြိနျမီသလား။ အခြိနျမမီဘူးဆိုရငျ message ပို့ရမလား။ ဒါမှမဟုတျ လူမှုကှနျရကျကိုသုံးပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့မဲဆန်ဒနယျမွကေ လူတှသေိအောငျလုပျမလား စသညျဖွငျ့ ဒီလိုနညျးလမျးတှကေိုတော့ ခေါငျးဆောငျပိုငျးအသီးသီးက အမွဲတမျးစဉျးစားနဖေို့လိုတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အခုနောကျပိုငျးမှာဆိုရငျတော့ နညျးပညာနဲ့ သုတသေနပိုငျးတှကေ ပိုပွီးတော့မှ အခရာဖွဈတယျ။ ဆိုလိုခငျြတာက ကိုယျ့ရဲ့မဲဆန်ဒနယျမွမှော ဘယျသူက မဲပေးမလဲ။ အဲဒီမဲပေးတဲ့လူကို ကိုယျကရအောငျ ဘယျလိုလုပျရယူမလဲဆိုတဲ့ အပိုငျးတှမှောတော့ ကမြတို့မှာ ယှဉျပွိုငျရမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ယှဉျပွိုငျခွငျးသညျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ရလဒျတှကေို ကမြတို့က ရရှိစတေယျ။ မဲဆန်ဒရှငျတှအေတှကျ ပိုကောငျးတယျ။ ပိုတျောတဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမှုတှေ ပွငျးထနျမှပဲ ပိုကောငျးတဲ့ကိုယျစားလှယျတှကေို ရမယျ။ အဲဒီလိုမြိုးဆိုတော့ ပါတီတှအေနနေဲ့ ပါတီငယျတယျ၊ ကွီးတယျ သဘောမထားဘဲနဲ့ ငါတို့ဘယျလိုလုပျမလဲ။ ဘယျလိုနညျးလမျးကို ရှာမလဲဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ သှားမယျဆိုရငျတော့ တရားမြှတတဲ့ အခွအေနတေဈခုကို ရောကျဖို့အတှကျ အနညျးငယျတှနျးအားဖွဈမယျ။
အဲဒီလောကျနဲ့လဲ ကမြတို့က မရဘူး။ ဘယျလိုမြိုး ရှိသေးလဲဆိုတော့ ဥပမာ လကျရှိအစိုးရအဖှဲ့အနနေဲ့က တနျးတူညီမြှဖွဈတဲ့ အနအေထားမြိုးတှေ ဖနျတီးပေးရုံတငျမကဘဲ၊ ဥပမာ ဒီကာလမှာ အောငျနိုငျရေးလုပျဖို့ဆိုတာ မလှယျတော့ဘူး။ အဲဒီလိုမြိုးဆိုရငျ အစိုးရရဲ့ မီဒီယာ၊ ပွညျသူပိုငျမီဒီယာတှကေို ပိုပွီးတော့ ပေးသုံးတာမြိုးတှေ။ ဘယျတုနျးကတော့ (၁၀) မိနဈ၊ (၁၅) မိနဈ Broadcast လုပျပွီးတော့ ပါတီတှအေကွောငျးပွောတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး မဟုတျတော့ဘူး။ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးလုပျရမယျ့ နှဈလအတှငျးမှာ သူတို့ကို ပိုပွီးတော့ ပေးသုံးတာမြိုးတှေ၊ ရဒေီယိုခနျြနယျလျတှေ ပေးလုပျတာမြိုး၊ ပေးပွီးတော့သုံးခှငျ့ပွုထားမယျ၊ ပေးမြှမယျ အကုနျလုံး ကိုယျစားလှယျလောငျးတှနေဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှအေတှကျကို ယှဉျပွိုငျနိုငျမယျ့ လှုပျသာကိုငျသာရှိမယျ့ အနအေထားမြိုးလေးတဈရပျကို ဖနျတီးပေးနိုငျမယျဆိုရငျတော့ တရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲတဈခု ဖွဈလာမယျ့အခွအေနေ ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ တဆကျတညျး ကနြျောမေးခငျြတာက ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ နညျးဥပဒတှေေ၊ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေ ကိုဗဈအခွအေနနေဲ့ ကိုကျညီအောငျ ပွောငျးလဲဖို့ လိုနတောတှေ ရှိပါလား။
ဖွေ ။ ။ လိုတယျလို့ ပွောတဲ့လူတှေ ရှိသလို၊ မလိုဘူးလို့လဲ ဆှေးနှေးကွတဲ့လူတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခုရှိတာက ကမြတို့ ဘာတှရေ့သလဲဆိုရငျ တခြို့နိုငျငံတှမှော လှတျတျောမှာ ဥပဒတေဈရပျ၊ ဥပဒကွေမျးကို တငျသှငျးပွီးတော့ ကိုဗဈဥပဒေ။ ဥပမာ ဒီလိုကပျရောဂါဖွဈရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာမြိုးကို လှတျတျောမှာ သူတို့ဆှေးနှေးကွတယျ။ အဲဒါမြိုးလဲ ကမြတို့ လုပျလို့ရတယျ။
မေး ။ ။ ကနြျော နောကျဆုံးတဈခကျြ မေးခငျြပါတယျ။ အခုန မမွန်ဒာသငျး ပွောသှားတဲ့အထဲမှာလဲ ပါပါတယျ။ အခု ကိုဗဈကာလ အကပျြအတညျးမှာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအခြို့က ရှေးကောကျပှဲတှကေို မရရအောငျ လုပျသှားတာတှေ ရှိတယျ။ လုပျသှားနိုငျတာတှေ ရှိတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခုလိုအခွအေနမြေိုး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကလဲ အခုလိုအနအေထားမြိုး။ ပါတီတှရေဲ့ အနအေထားမြိုးနဲ့ ရှေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလထဲမှာ ကငျြးပသှားမယျဆိုရငျ လှတျလပျမြှတမှုကို တစုံတရာ ထိခိုကျသှားနိုငျမယျ့ အနအေထားမြိုး ရှိပါသလား။ မမွန်ဒာသငျးရဲ့ အမွငျကို သိခငျြပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ အရငျလောကျတော့ …. သခြောတာကတော့ တအားကို ခကျခဲနိုငျမယျ။ ဒါပမေဲ့လဲ ဘယျလောကျအထိ လုပျနိုငျသလဲ။ အခု အခြိနျကရှိနသေေးတော့ ရှိတဲ့အခြိနျလေးပျေါမှာ ဘယျလိုမြိုးပွငျဆငျပွီးတော့ - ပွငျဆငျတဲ့နရောမှာလဲ တဦိးတဖှဲ့တညျးက မဟုတျဘဲနဲ့ ဥပမာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဆိုရငျ မဲဆန်ဒရှငျတှအေတှကျ လုံခွုံစမေယျ့ မဲရုံတှမှော Mobile Clinic တှေ ထားပေးမယျ။ အပူခြိနျမွငျ့နတေဲ့ လူတှဆေိုရငျတော့ မဲရုံထဲကို မဝငျဘဲနဲ့ အပွငျမှာပဲ ပေးမယျ။ ဥပမာ တံဆိပျတုံးကို ထုမယျဆိုရငျ လူတှအေမြားကွီးက ကိုငျကွမယျဆိုရငျ ကူးစကျမှုတှေ အန်တရာယျတှေ ပိုရှိတာကွောငျ့ ကိုယျ့ဘောပငျ ကိုယျယူလာပွီးတော့ အမှတျခွဈမလား စသညျဖွငျ့ ဒါက ဘယျလိုမြိုး စီမံခနျ့ခှဲဆိုတဲ့ အခွအေနပေျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ ဘယျလောကျအထိ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိပွီးတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈမလဲဆိုတာကတော့ အားလုံးရဲ့စိနျချေါမှုတဈခုပါ။
မေး ။ ။ အခုလို ပွောပွပေးတာ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ ကမြလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Covid-19 ကပ်ဘေးကြောင့် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲထိခိုက်နိုင်လား
COVID-19 ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ရိုက်ခတ်နိုင်ခြေ